မီးငယ်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: March 2011
Posted by မီးငယ် at 10:47 PM 1 comments
Posted by မီးငယ် at 11:53 AM4comments
Posted by မီးငယ် at 11:51 AM3comments
၀က်သားချဉ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ၀က်သားအဆီမပါတဲ့အသားချည်းပဲ တကီလိုလောက်ကို အရင် ကြိတ်စက်နဲ့ကြိတ်လိုက်ပါနော် .. အလွယ်တကူလုပ်ချင်ရင်တော့ ကြိတ်သား သုံးလည်းရပါတယ် .. ပြီးရင် အချိုမှုန့်မသုံးဘဲ သကြားရယ် .. ဆားရယ်ကို အနေတော်လေးထည့်ပြီး နယ်ပေးပါ .. ခနလောက်နယ်နှပ်ထားပေးလိုက်ရင် အရသာပိုစိမ့်ဝင်ပါတယ် .. ပြီးရင် ရှမ်းဆန်ရှိတဲ့နေရာတွေအတွက်တော့ ရှမ်းဆန်ပေါ့ .. ကျွန်မကတော့ ယိုးဒယားဆန်ကို ၀ယ်ထားတယ် .. အဲ့ဒီဆန်ကို ထမင်းအနေတော်လောက်လေးချက်ထားပေးပါ .. ထမင်းကိုတော့ အများကြီးမသုံးဘဲ သင့်ရုံ.. တကီလိုအတွက်ဆိုရင်တော့ လက်တဆုပ်သာသာလောက်ဆို အနေတော်ပါပဲ .. ဇလုံတခုထဲမှာထည့် .. ခုနက နယ်နှပ်ထားတဲ့ ၀က်သားကိုထည့်ပြီးနယ်ပေးပါနော် .. ရိုးရိုးနယ်ရုံမဟုတ်ဘဲ ငါးထမင်းနယ် နယ်သလိုမျိုး ကြေနေအောင် ခြေရင်းနယ်ပေးရမှာပါ ... အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆားလေးနည်းနည်းနဲ့ သကြားလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပေးပါနော် .. ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီနယ်ထားတဲ့ထမင်းဝက်သားအရောကို ငှက်ပျောဖက်နဲ့ထည့်ထုပ်ပေးပါ . ( ကျွန်မတို့ဆီမှာတော့ အုအဲနို ဆိုတဲ့နေရာမှာ ငှက်ပျောဖက်ရတယ် .. ) ငှက်ပျောဖတ်နဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကလေးဖြစ်အောင်စည်းဖို့တော့လိုပါတယ် .. အပေါ်ကနေ ကြိုးနဲ့တင်းတင်းလေးစည်းပေးပါနော် .. ပြီးတာနဲ့ အပေါ်ကနေ လက်ကိုင်ပ၀ါလေးပဲဖြစ်ဖြစ် .. ပိတ်စခပ်ပါးပါးလေးနဲ့ ထပ်ထုပ်ပေးရပါမယ် .. ပလတ်စတစ်ဇလုံထဲကို အဲ့ဒီအထုပ်ကိုထည့်ပြီးတော့ အပေါ်ကနေ အလေးတုံးတခုခုနဲ့ ဖိပေးထားပါ . စမ်းပြီးလုပ်စားချင်တဲ့ မမတွေ ညလေးတွေက မြန်မာတို့ စလုံးတို့မှာနေတာဆိုရင် ပူတဲ့ဒေသဆိုတော့ကာ ၅ရက် ကနေ အလွန်ဆုံးတပတ်လောက်ဆို စားလို့ရပါပီရှင် .. ကျွန်မလုပ်တာအခု အေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ဆယ်ရက်လောက်တော့ထားလိုက်ရပါတယ် .. ဘယ်ဒေသမှာဖြစ်ဖြစ် ဆယ်ရက်မကျော်ပါစေနဲ့ .. ဆယ်ရက်ကျော်သွားခဲ့ရင် အချဉ်စူးသွားတတ်ပါတယ် .. စားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ .. မြေပဲကလေးထောင်းပြီး ဆီချက်ကလေးချက်လိုက်ပါ .. မြေပဲဆီချက်ပေါ့ .. ငရုတ်သီးမှုန့်လည်းနည်းနည်းထည့် .. ကြက်သွန်ဖြူရယ်.. မြေပဲထောင်းရယ်ကို ရောပြီးချက်တဲ့ဆီချက်ပါ .. အဲ့ဒါလေးကို အပေါ်ကနေ ဆမ်း .. ဘေးနားမှာ ငရုတ်သီးခြောက်ကြော်လေးရယ် .. ကြက်သွန်ဖြူလှီးထားတာလေးရယ် .. ဂျူးမြစ်ရှိရင်ဂျူးမြစ်ကလေးရယ်ကို ရောပြီးစားလိုက်ရရင်ဖြင့် အရသာရှိတဲ့ ၀က်သားချဉ်လေး ဖြစ်ပါပြီလို့ ........... ချက်နည်းမဟုတ်ရင် အပြစ်မပြောနဲ့နော် .. စားကြည့်ပြီးပြီ.. အရသာရှိတယ် ... .. ချက်တတ်သလိုချက်ထားတာ ..
တောင်မရောက်မြောက်မရောက် စားချင်သလိုချက်ထားတဲ့ ဟင်းကလေးကို အားပေးသွားကြပါဦးနော် ...
Posted by မီးငယ် at 1:09 PM5comments
Posted by မီးငယ် at 11:37 AM0comments
ခံစားချက်မှုတွေ စုံးစုံးမြုပ်လို့ ..
အိပ်စက်ခြင်းတွေ မေ့လျော့နေခဲ့လေရဲ့ ...
ကိုယ်က အိပ်မက်တွေထဲ ကယောင်ကတမ်းနိုးထခဲ့ရင်တောင်
ထထိုင်ရတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ် ..
ကိုယ့်ရှေ့က စားပွဲပေါ်မှာတော့ တွယ်ရာမဲ့ ကွန်ပျူတာလေးရယ်..
အေးစက်နေတဲ့ ကော်ဖီတခွက်ရယ် ...
ကိုယ့်ရဲ့ဘေးက လေညင်းတွေတိုက်နေတဲ့ ၀ရန်တာလေးရယ် ..
ကြယ်လေးတွေ လင်းလက်နေလေရဲ့ ...
ကိုယ့်ရဲ့ ကြယ်လေးရော ...
ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေလိမ့်မလဲ ..
ဟော.... ကိုယ့်ရဲ့ကြယ်ကလေး ..
ကိုယ့်ရဲ့ကြယ်လေး ကွယ်ပျောက်သွားပြီ ...
သြော် .. ရောင်နီလင်းသွားပြီကိုး....
Posted by မီးငယ် at 1:01 PM 1 comments